I-Molecule Yentsha i-NAD +: I-Coenzyme Ebalulekile Empilweni Yabantu
Intsha Molecule NAD +: I-Coenzyme Edlala Indima Ebalulekile Empilweni Yabantu
Wake wezwa ngawo I-Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) noma “Umthombo Wobusha”? ” Ngokudla okufanele nokuzivocavoca okufanele, umzimba wakho uvame ukwakhelwa i-metabolism efanelekile.
Ngeshwa, ngokugula, ukukhula ngeminyaka kanye / noma indlela yokuphila engenampilo, umzimba wakho uqala ukuhlangabezana namaphutha ahlukahlukene abona ukusebenza kwawo kwehla ngokumangazayo. Izinga eliphansi le-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) liphakathi kwalokhu kushoda, futhi kulapho NAD + isengezo Kuza kube lula ukuvala igebe lokuntuleka, ikakhulukazi ekuthuthukiseni inqubo yokuguga enempilo.
INicotinamide adenine dinucleotide (NAD) isho i-coenzyme ehlanganisa i-adenine futhi nicotinamide. Noma isiphi iseli ephilayo liqukethe leli khompiyutha, elitholakala kwiNicotinamide Riboside. Amazinga we-NAD emzimbeni womuntu athonya isilinganiso sakhe sokuguga.
Kunezinhlobo ezimbili ze-NAD, okungukuthi, i-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) kanye ne-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H) (NADH). Eyangaphambili inama-elektroni amabili angeziwe, futhi yilokho okukubeka ngaphandle kokugcina.
Kuyini i-NAD +?
I-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) iyi-pyridine nucleotide ekhona futhi ibaluleke kakhulu kuwo wonke amaseli aphilayo. Le pyridine nucleotide isiza izinqubo eziningi zezinto eziphilayo lapho isebenza njenge-cofactor yokhiye kanye ne-substrate. Lezi zinqubo zifaka ukukhiqizwa kwamandla, ukulondolozwa nokulungiswa kwe-DNA okunempilo, ukugonyelwa kanye nkulumo yofuzo. Lokho kuchaza amandla okubuyela kwesibonakaliso sokuguga kwe-NAD +.
I-NAD + nayo idlala indima ebalulekile ekusayinisweni kwesithunywa sesibili kanye nemisebenzi ye-immunoregulatory.
Njengomsunguli wobusha, NAD + ukhonjwe njengento esemqoka enqubweni yokuguga. Izifundo ezahlukahlukene zisekele isikhundla sokuthi izinga le-NAD + emzimbeni womuntu linokuhlangana okuqondile nobusha bomuntu. Ukuphakama kwamazinga we-NAD +, mancane amaseli omzimba, izicubu kanye nawo wonke umzimba. Lokho kwakha isisekelo sokubuyela emuva kokuguga kwe-NAD +.
Ngakolunye uhlangothi, ukushoda kwe-NAD + kungaholela ekukhathaleni kanye nezifo ezahlukahlukene. Njengoba kunje, amazinga anele we-NAD + ngokungangabazeki abalulekile empilweni yomuntu.
Isebenza kanjani i-NAD +?
Lapho umzimba wakho ungakwazi ukufeza amazinga we-enzyme enempilo namazinga okukhiqiza, kuqala ukubonisa izindaba ezahlukahlukene zezempilo njengokuncipha kokuqina, izingqinamba zokukhumbula kanye nesilinganiso sokucabanga esincishisiwe. Lokhu kungenxa yokuthi alinawo amazinga anele we-NAD + ne-NADH ukusekela ukuvuselelwa okujwayelekile nokusebenza kwamaseli womzimba.
Ikakhulu, ukhiye Umsebenzi we-NAD + ukusekela ukuphendula kwe-metabolic yomzimba, ngokunika amandla ukudluliswa kwama-elektroni kusuka ku-mocule kuya kwelinye, ngenqubo eyaziwa ngokuthi yi-redox reaction. Ngokuphendula kwe-redox, izakhi zomzimba ziyakwazi ukukhulula amandla agcinwe esibophweni esibuthakathaka somoya ophelele.
Imvamisa, amaseli womzimba wakho adinga amandla avela egazini ukuze awanikeze amandla okwenza imisebenzi ehlukahlukene ye-metabolic. Ikakhulu, amandla abawadingayo agcinwa njengamafutha acid kanye noshukela. Ngakho-ke, indima eyinhloko ye-enzyme ye-NAD + lapha ukwenza ukuthuthwa kwemithombo yamandla kusuka egazini kuya kumaseli afanele.
Lapho okunamafutha acid noshukela kukhulula amandla, i-enzyme ye-NAD + yenza kube lula ukuthuthwa kwamandla kuya e-mitochondria ukuze kuqhutshekwe kuguqulwe amandla weselula. Ngaphandle kwalokho, uma kwenzeka kushoda i-NAD +, ukudluliswa kwamandla esitokisini kuyaphazamiseka, futhi lokhu kubangela ukungasebenzi kahle kwe-mitochondrial, okusheshisa inqubo yokuguga.
Kuwo wonke ama-NADH, i-NAD + iyakwazi ukukhiqiza ama-molecule amathathu e-ATP. Njengomphumela wamandla amangqamuzana, uba namandla ngokwengeziwe, ngokwengqondo nangokomzimba, ngoba i-NAD + inikeze izinqubo zakho zemvelo ezihlobene nokuguga zikhulisa nge-oxidation.
Ngokukhethekile, umsebenzi oyinhloko we-NAD + ubandakanya ukusebenzisa ama-enzyme abhekene nokuphendula kabusha kwe-redox emzimbeni. Lama enzymes ayaziwa ngokuhlangana ngokuthi ama-oxidoreductases. Kubandakanya i-Sirtuin enzymes (SIRT), ama-polymerases we-poly-ADP-ribose ne-cyclic ADP ribose hydrolase (CD38).
Ukugxila ekusebenzeni kwe-Sirtuin, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi umsebenzi oyinhloko wama-enzyme we-sirtuin ukucisha izakhi zofuzo ezenza ukuguga kube lula. Izakhi zofuzo zifaka lezo ezibamba iqhaza ekuhlanganisweni kwamafutha nokugcina, ukuvuvukala kanye nokulawulwa kukashukela wegazi. Ukuze ama-enzyme e-sirtuin ukufeze lokho, adinga ama-enzyme e-NAD + njengoba lawa ma-molecule we-NAD ebasiza ukukhipha amaqembu e-acetyl kusuka kuma-protein ukuze aguqulwe.
Ngakho-ke, ukwanda kwamazinga we-NAD + kuhunyushwa kunombolo ephezulu yamaSirtuins asebenzayo. Lokhu kuphumela ekuphefumuleni okwenyuka kwe-mitochondrial kanye nokuzwela kwe-insulin okuthuthukile.
Imiphumela yokuthuthuka okunjalo kwemetabolism iholela ekuguqukeni komphumela wobudala bokukhula kobuchopho, ngenxa yamandla okubuyela emuva kwe-NAD +. Futhi, ukuzwela kwe-insulin okuthuthukile kusiza umzimba wakho ukuba ulondoloze amazinga kashukela egazi anempilo. Ngenxa yalokhu, amaseli omzimba wakho abonakala emncane futhi aziphatha ngendlela yobusha, okunikeza ukubukeka kobusha.
Ngaphezu kwalokho, i-NAD + ikhonjwe njenge molekyuli ebhekele kakhulu ukusayina kwangaphandle, okuyisisekelo sokuxhumana kweselula-kuya-cell. Futhi, isebenza njenge-novotransmitter yenoveli, edlulisa ulwazi kusuka ezinhlizweni kuya kumaseli wethambo wezitho zomzimba ezibushelelezi.
Izinzuzo / Umsebenzi weNAD +
Kuningi Izinzuzo ze-NAD + nemisebenzi efaka:
I-1.Protection evela ezimeni zokuwohloka ezihlobene nobudala
Izinzuzo zokulwa nokuguga ze-NAD + ziphakathi kwezizathu ezinkulu zokuthi kungani abantu abathanda impilo bafuna ukubona amazinga abo e-NAD + enempilo ngaso sonke isikhathi. Njengoba abantu bekhula, ukulimala kwabo kwe-DNA kuyanda, futhi lokhu kubangela ukuncipha kwamazinga we-NAD +, umsebenzi we-SIRT1 wehle futhi wehlise umsebenzi we-mitochondrial. Lokhu kwenzeka ngenxa yengcindezi yeselula ye-oxidative, okuthi, ngolimi lwe-layman, kusho ukuthi ama-antioxidants omzimba nama-radicals wamahhala awahambisani.
Ngenxa yalokho, umuntu osekhulile angabhekana nezimo ezehlukene zezempilo ezifana ne-atherosclerosis, isifo senhliziyo, i-arthritis, i-cataract, isifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophezulu, phakathi kwabanye.
Ngenhlanhla, ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi i-NAD + ihlinzeka ngokuvikelwa kokucindezela kwe-oxidative kumaseli womzimba. Ngakho-ke, ukuthatha ukudla kwe-NAD +, izithasiselo noma ukwamukela ezinye izindlela zokungenelela zokuthuthukisa amazinga ze-NAD + kungasiza abantu asebekhulile, ikakhulukazi labo abangaphezulu kweminyaka engama-50 ubudala, ukuba babe nempilo enhle njengoba ukuhlala kwabo emhlabeni kukhula.
I-NAD + eyengeziwe ithuthukisa ukusebenza futhi isekele ukukhula kwe-mitochondria. Ibamba iqhaza elibalulekile ekugcineni kwamazinga e-ATP anele kumaseli, obekungenakuvinjwa ngokuguga okuthuthukile.
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-NAD + isekela amandla okukhiqiza amandla we-mitochondria womzimba wakho. Lapho i-mitochondria yakho ingakhiqizi amandla anele, izitho ezibalulekile ezinjengezinhliziyo, ubuchopho, izicubu namaphaphu ziyehluleka ukwenza kahle futhi okuholela ekukhathaleni nasekhuthazweni kokuncipha.
Ngakolunye uhlangothi, lapho umzimba wakho unenqanaba elanele le-NAD +, lezi zitho ziyakwazi ukusebenza ngamazinga aphilile futhi ngenxa yalokho, uzizwa unamandla, ugqozi, uphilile futhi unengqondo ekhanyayo. Iseli ngalinye eliphilayo lidinga le coenzyme njengoba ikhuthaza ukukhiqizwa kwe-adenosine triphosphate.
Amangqamuzana asebenzisa i-adenosine triphosphate ukukhiqiza amandla amalungu akho ahlukene owadingayo ukuze enze umsebenzi owafunayo. Lapho umzimba wakho unamandla, amaseli akho ayakwazi ukulwa nemizwa yokukhathala ejwayelekile ngempumelelo.
3.Umsebenzi wobuchopho obuthuthukisiwe
Ukukhathala kubambezela ukusebenza kwengqondo yakho. Kukwenza uzizwe sengathi ingqondo yakho ayinangqondo noma ngamafu. Kodwa-ke, sesivele sabona ukuthi i-NAD + inikeza usizo lokukhathala. Ngakho-ke, i-coenzyme ikhuthaza ukusebenza kwengqondo yakho ngokubangela ukukhiqizwa kwamandla okwanele kwamangqamuzana akho obuchopho, kubenza bakwazi ukulwa nokukhathala. Ngenxa yalokhu, ingqondo yakho iyaqaphela ngokwengeziwe futhi inikezwe amandla ngokwanele okusingatha imisebenzi ehlukahlukene edinga ukuthi ucabange.
Ukuqina kokucindezela kweseli okuthuthukisiwe
Kwesinye isifundo kuhloswe ngaso ukusungula umthelela we-NAD + ekucindezelekeni kwe-oxidative yeselula, abacwaningi bathole lokho Ukwelashwa kwe-NAD + yenza amaseli welebhu akwazi ukumelana nengcindezi. Ngakolunye uhlangothi, amaseli anganikezwanga nge-NAD + ancipha ekucindezelekeni kwe-oxidative Ngakho-ke, kusho ukuthi le coenzyme inyusa isikhathi sokuphila kwamangqamuzana omzimba wakho, isiza umzimba wakho ukulwa namagciwane ahlukahlukene abangela izifo ngempumelelo.
Ukulungiswa kwe-5.DNA okwesikhathi eside sokuphila
Empilweni yakho yansuku zonke, uvezwa izinto nezimo ezahlukahlukene ezingalimaza i-DNA yakho. I-DNA eyonakalisiwe inciphisa impilo yakho. Kodwa-ke, ngokunikezwa okwanele kwe-NAD + emzimbeni wakho, lawa ma-coenzymes alungisa ukulungiswa kokulimala ngokuhambisa ama-electron ezindaweni ezine-DNA eyonakele. Lokhu kungokwezifundo eziningi eseze nesiphetho sokuthi ukugcwaliswa kabusha kwe-NAD + kwandisa isikhathi sokuphila kwesilwane noma umuntu.
6.Ukulala nokudla ngendlela ejwayelekile
Abaphenyi abahlukahlukene bathole ukuthi i-NAD + inethonya elimangalisayo kumjikelezo wokulala womuntu kanye nephethini yendlala. Isikhathi esivame ukulala noma ukuvuka ngaso kanye nokugeleza okujwayelekile kosuku lwakho olujwayelekile kuya ngesigqi senhliziyo yakho. Futhi, ukukhiqizwa kwama-hormone endlala emzimbeni wakho kuthonywa kakhulu ikhemikhali.
Ukuxhumana okufanele phakathi kwe-sirtuins kanye Imiphumela yeNAD + ngesigqi senhliziyo ethambile nenhliziyo. Ngaphandle kwalokho, ukuphazamiseka kwe-NAD + noma i-sirtuins kuphumela isigqi esingenampilo se-circadian, ngaleyondlela ukungadli kahle nephethini yokulala. Ngakho-ke, i-NAD + iphathelene nokulala kahle nenqubo yokudla. Ngalezi ezimbili zokuhlola, kuzoba lula kuwe ukufeza nokugcina isisindo esinempilo.
Ngokunikela ngayo yonke imisebenzi yezinzuzo ezingenhla, akungabazeki ukuthi i-NAD + idlala indima ebalulekile ekusizeni abantu ukuba baphile impilo enempilo ngisho nasekhula.
Ukusetshenziswa / Ukusetshenziswa kwe-NAD +
1.Kuthuthukisa ukufunda nokubamba inkumbulo
Abantu abaningi bayazi ukuthi leli khompiyutha linamvelo
ukubuyiselwa kanye nokwenza ngcono kwezindlela ze-neural ebuchosheni.
Ngaphandle kwalokho, isusa ukukhathala kwengqondo nokujwayelekile, ngaleyo ndlela ithuthukise ukucaciseka kwengqondo.
Ngenxa yalokho, umuntu uyakwazi ukufunda nokukhumbula kahle kakhulu.
Izimbambo ze-2.Thicker nezinwele
Imisipha nezinwele kubonakala kakhulu ukuchaza ubuhle bomuntu, ikakhulukazi abesifazane. Ngenxa yekhono layo lokukhuthaza ukulungiswa kwe-DNA elimele, i-NAD + ibalulekile kwizipikili nezinwele ezikhulu. Njengoba kunje, yikhompiyutha yamakhemikhali efunwa kakhulu kubantu abakhathazekile ngezinwele zabo ezothile kanye / noma izipikili.
Ukuguga phakathi kwabantu kuza namaphutha wesikhumba afana nemibimbi, imigqa emihle nokukhanya okungalingani. Kodwa-ke, labo abafuna ukwedelela izimpawu zokuguga bathatha izithasiselo ze-NAD +, ezisebenza kahle ngenhloso. The Ukuguga kwe-NAD + inzuzo idumile kakhulu.
4.Muscle umsebenzi ngcono
Njengoba abantu bekhula, baba amafushane futhi babuthakathaka ngenxa yokungasebenzi komzimba okuhambisana nokuguga. Kodwa-ke, labo abathole amandla we-anti-ukuguga we-NAD + isisekelo kuwo ukuze bathuthukise ukusebenza kwemisipha yabo.
5.Ukuqanjwa kwezifo ezihlobene nobudala
Ngaphezu kwalokho, abantu abanokuthenga okuphansi kwe-NAD + emizimbeni yabo ngenxa yokuguga bafuna imithombo yangaphandle yekhemikhali yokuqinisa ukungatheleleki kwabo. Ukuhlinzekwa okwengeziwe kwe-enzyme kwenza imizimba yabo ikwazi ukumelana nokugula okuhlukahlukene okuhambisana nokuguga.
Idosi ye-NAD +
Yize i-NAD + iyindawo yemvelo, kufanele ithathwe ngokulinganisela. Ngokwe-Food and Drug Administration agency (FDA), okuphephe kakhulu Umthamo we-NAD + okungenani amagremu amabili ngosuku. Isikhathi sokwelashwa esinconyiwe yizinsuku eziyisikhombisa kuya kwezingu-7, kuya ngomlando wezokwelapha womsebenzisi.
Imiphumela Yokuwa kweNqanaba leNAD +
Kubaluleke kakhulu kuwo wonke umuntu ukuqinisekisa ukuthi banamazinga anele e-NAD +. Iyanda
Amazinga we-NAD + ayadingeka kubantu ababhekene nokushoda kwe-NAD +. Lokhu kungenxa yokuthi ukusilela kwe-NAD + kunemiphumela emibi eminingana engafakiwe:
1. Izimpawu zokuguga
Kumuntu osemusha, i-NAD + ne-NADH ziningi kakhulu uma kuqhathaniswa namazinga atholakala kubantu asebekhulile. Ukwehliswa kwamazinga we-NAD + ngeminyaka kuholela ekwehliseni umsebenzi we-SIRT1, ngaleyo ndlela kusheshiswe ukwenzeka kwezimpawu zokuguga. Uma kunjalo, indlela ephumelela kunazo zonke yokuguqula noma ukuvimbela lezo zimpawu ukukhuphula izinga le-NAD + emzimbeni. Ngokuqiniswa kwe-coenzyme kuzodala umsebenzi omningi we-SIRT1, ngaleyo ndlela ube nombono womzimba ovuselelwe kakhudlwana.
I-Hypoxia yisimo esibonakala ngokuhlinzekwa komoya komoya ophansi emzimbeni womuntu. Isimo lesi siholela ekunyukeni kwe-NADH ne-NAD ephansi futhi ibonakala ngezimpawu ezinjengokucwazimula kwesikhumba, ukudideka, ukushaya kwenhliziyo okuhamba kancane, ubunzima bokuphefumula, ukujuluka nokukhohlela okuqhubekayo.
Abantu abahlushwa i-hypoxia bangathola impumuzo kwizimpawu ngokwandisa amazinga abo e-NAD +. Labo abasengozini enkulu yesimo nabo banganciphisa ukubekeka kwabo amandla ngokuqinisa amazinga abo we-NAD + futhi.
3. Ukushiswa yilanga nokulimala kwesikhumba
Ukwesaba ukushiswa yilanga noma ukulimala kwesikhumba ngenxa yokuvela kwelanga? I-NAD + futhi NADH kukusibekele. Zombili zinikezela ukuvikela kwakho kwesikhumba elangeni kanye nakumdlavuza wesikhumba ngokuthola ama-UVB kanye ne-UVA, ngokulandelana.
Uma uzwa ukukhathala okungaqondakali nobuthakathaka obujwayelekile bomzimba, ungaba namazinga aphansi we-NAD +, ngalokho kuncishiswe umsebenzi we-SIRT1. Esimweni esinjalo, i-NADH noma i-NAD + supplementation ingakhulula izimpawu zokukhathala ngokusebenzisa amandla we-mitochondria function.
5. umzimba syndrome
Ngokusebenzisa amandla kweSirtuins, i-NAD + ithuthukisa ukusebenza kwezakhi zofuzo ezithonya umzimba ngokungaqondile. Njengoba, abantu abanezinkinga zokulawulwa kwesisindo ngenxa ye-metabolism emibi bangafinyelela amazinga wabo wesisindo afisayo nge-NAD +. Lokhu futhi kungaba yisixazululo esisebenzayo kuwe uma wesaba ukuthola isisindo esingenampilo noma i-cholesterol ephezulu ye-LDL ngenxa yesimo sokuyekethisa umzimba.
6. Izifo zenhliziyo
Umsebenzi we-NAD + emzimbeni uthonya umsebenzi we-mitochondria, obalulekile ekusebenzeni kahle kwenhliziyo. Ukushoda kwenhlanganisela yamakhemikhali kungasheshisa ukwehluleka kwenhliziyo, into okungekho muntu ongafuna ukuyizwa. Ngakho-ke, uma unamazinga aphansi we-Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +), mhlawumbe ngenxa yokulimala kwe-ischemia-reperfusion noma yisiphi esinye isifo senhliziyo, uzozizwa ungcono futhi nenhliziyo yakho yenhliziyo izothuthukisa lapho kukhulunywa ngokuhlinzekwa kwe-coenzyme emzimbeni wakho.
7. I-Multiple Sclerosis (MS)
Ukuhlushwa i-sclerosis eminingi? Uma yebo, khona-ke kufanele ucabangele ukuzuza kuzinzuzo ze-NAD + powder ngokusebenzisa NAD + isengezo ukuphuza ukukhululeka kwezimpawu zesifo.
I-Multiple Sclerosis ibonakala ngezinga eliphansi le-NAD + kumasosha omzimba ngenkathi uhlelo lwezinzwa luthola ukuntula okufanayo. Ukwengeza kwe-NAD + kuzonciphisa ukuntuleka kwesakhi samakhemikhali ohlelweni lwezinzwa, ngaleyo ndlela kuthuthukise izimpawu zakho ze-MS.
8. Impilo yengqondo nezimo ze-neurodegenerative
Uma uhlangabezana nempilo yengqondo noma isimo se-neurodegenerative esifana nesifo se-Alzheimer's, isifo sikaParkinson noma isifo sohlangothi, khona-ke ukwesekwa kwe-NAD + kuyasiza ekubuyiseleni impilo yakho. Lokhu kungenxa yokuthi lezi zimo zidala Ukuntuleka kwe-NAD +, okuholela ekunciphiseni kwamandla akho obuchopho kanye ne-dopamine. Njengoba amandla ubuchopho kanye ne-dopamine kuyizinto ezibalulekile ezinhlelweni zakho zengqondo nezinzwa, izimpawu zakho zingase zibe zimbi kakhulu uma ungatholi indlela yokwandisa amazinga akho e-NAD +.
Indlela Khulisa Amazinga nad + Ngokwemvelo?
1. Ukwenza izivivinyo zomzimba
Njengoba zikhula, umzimba kubalulekile empilweni yakho. Ngokuvivinya umzimba njalo, ikhono lomzimba wakho ukuba umkhiqizo nad + is umfutho. Udinga amandla okwenza umsebenzi wokuzivocavoca. Ngakho-ke, lapho uzivocavoca kakhulu, umzimba wakho ukhiqiza amandla ngokwakha umkhiqizo we-mitochondria. Ngenxa yalokho, nad + yakho ezingeni inyuka ngokwemvelo.
2. Ukuzila ukudla njalo
Yize ukuzila kwenziwa ikakhulukazi njengendlela yokuzinikezela ngokwenkolo, futhi kunezinzuzo ezahlukahlukene zezempilo ongazinikeza, kufaka phakathi ukukhuphula amazinga we-NAD + nokusebenza kwe-SIRT1.
3.Ukuthanda ukubonwa kakhulu yilanga
Imisebe ye-ultraviolet evela elangeni isheshisa ukuguga kwesikhumba sakho. Okubi kakhulu ukuthi, ukuchayeka ngokweqile emisebeni yelanga kulimaza izitolo ezinegalelo kulungiswa kwamaseli wesikhumba alimele. Lokhu kuholela ekwehleni kwezinga le-NAD +. Ngenxa yalokho, ukuba kungenzeki lokhu futhi ukusiza umzimba wakho ekugcineni izinga enempilo nad + ngokugwema ukuchayeka kakhulu elangeni noma nini ongakwenza. Futhi, zivikele emiphumeleni eyingozi yelanga ngokumboza isikhumba sakho nge-sunscreen esezingeni eliphezulu lapho uphuma ngaphandle ngosuku olunelanga.
4. Ukuthatha isengezo se-NAD +
Yize ukudla okunempilo okunomsoco wokudla ngendlela efanele kungumgogodla wokunikezwa kwe-NAD + okuhle kakhulu emizimbeni yethu, kwesinye isikhathi okunye okusamele kwenziwe. Ikakhulukazi, abantu abaneminyaka engama-50 ubudala badinga i-NAD + engaphezulu kunalokho ukudla okulinganiselayo okujwayelekile okungakunikeza. Kulokhu, izithako ezifakwe yi-NAD ziyasiza. Lezi zithasiselo ziza ngendlela yamaphilisi futhi kulula ukuzithola. Ziqukethe uvithamini B3 (nicotinamide riboside) kamuva oguqulwa ube yi-NAD + emzimbeni.
5. Ukulala ngokwanele
Ukulala ngokwanele nsuku zonke kungenye indlela engokwemvelo ekufukuleni amazinga anti-ukuguga kwakwakhe zamakhemikhali. Ukuphumula okuhle kukhuthaza ukukhiqizwa kwezinjini zemvelo emzimbeni wakho.
ukudla 6.Taking nad +
Abaphenyi bathole ukuthi, riboside nicotinamide, uhlobo lwevithamini B3, oluguqulwa lube yi-NAD + emzimbeni. Ama-coenzymes, njenge-NAD + eyenziwe ngumzimba, kamuva asetshenziswa ezinkambisweni ezahlukahlukene zomzimba eziholela ekwehliseni ijubane noma ekubuyiseleni emuva inqubo yokuguga emzimbeni womuntu. Njengalokhu, ukudla okuqukethe le vithamini (ukudla kwe-NAD +) kunganikeza ukwesekwa okuhle kwe-NAD +.
Ukudla okuqukethe i-nicotinamide riboside, futhi ongathembela kukho ukuthuthukisa izinga lakho le-NAD + ngokwemvelo kufaka:
Ubisi lobisi: Ucwaningo lukhombisa ukuthi ilitha ngalinye lobisi lwenkomo liqukethe i-9 μmol ye-NAD +.
Izinhlanzi: ezinye izinhlobo zezinhlanzi ezinjenge-tuna nesalimoni zicebile ku-NAD +. Okuqukethwe nad + ezwini elilodwa inkomishi tuna icishe 20.5mg futhi 10.1mg salmon.
I Crimini mushroom: Uma uthatha indebe ye-Crimini Mushroom, uzobe unikeze umzimba wakho nge-3.3mg ye-NAD +.
Inyama yenkukhu: noma ngabe iyisitshulu, yosiwe noma yosiwe, inkomishi eyodwa yenyama yenkukhu izokunikeza u-9.1mg we-NAD +.
Ukudla okumbiliso: Imvubelo ingumthombo ocebile we-NAD + uma kuqhathaniswa nobisi lobisi. Ngakho-ke, ukudla kwemvubelo njengamakhekhe nesinkwa kungasiza ekugcwaliseni kabusha izinga le-NAD + emzimbeni wakho. Yize ubhiya ungasebenza futhi njengomthombo we-coenzyme, kufanele ubuphuze ngokulinganisela.
Ama-veggies aluhlaza: Eminye imifino eluhlaza nayo Ukudla kwe-NAD + , Ikakhulukazi uphizi asparagus, abacebile bentsha ukugqugquzela kwakwakhe chemical nad +. Inkomishi yophizi iqukethe, i-3.2mg ye-NAD + ngenkathi inkomishi ye-asparagus ine-2mg yonkana.
Ukwamukela ukudla kwe-ketogenic: Ukudla i-keto kusho ukuzinciphisa ekudleni okunamafutha kodwa okunama-carb aphansi. Uma usebenzisa lokhu kudla, umzimba wakho ungena esimeni esaziwa njenge-ketosis lapho usebenzisa khona amafutha esikhundleni se-glucose yamandla. Lokhu kwenza ukuthi inani le-NAD + neNADH likhuphuke.
Ezinye Izinto Ezidambisa i-NAD +
Amazinga aphansi we-NAD + angadalwa yizici ezahlukahlukene kufaka phakathi:
1. Ukuvuvukala okungapheli
Ukuvuvukala okungapheli kuvimbela i-enzyme ye-NAMPT kanye nezakhi zofuzo ezibhekene nesigqi esijikelezayo. Njengomphumela, amazinga we-NAD + ay yehla.
2. Circadian isigqi ukuphazamiseka
Ukukhiqizwa nad + idinga NAMPT enzyme, ikakhulukazi isinyathelo sokugcina. Kodwa-ke, lapho isigqi somuntu esijikelezayo siphazamiseka, izinhlobo zofuzo ezibhekene nokukhiqizwa kwe-enzyme ziyathinteka futhi ngenxa yalokho, umkhiqizo wokukhiqizwa kwe-NAD + emzimbeni uyancipha.
3. Inani eliphezulu loshukela wegazi kanye namazinga e-insulin
Lapho amazinga kashukela futhi insulin ukwandisa ngokweqile, i-NADH / nad + isilinganiso iyakhula. Lokhu kusho ukuthi inani le-NADH liphakeme kakhulu uma liqhathaniswa nezinga le-NAD +.
4. Ukuphuza utshwala
Ukucwaninga okuningi kukhombisa ukuthi ukucindezela kwe-ethanol ngomphumela we Okungalapheki utshwala kubangela ukuncipha okungaba ngu-20% emazingeni we-NAD +. Lokhu kungenxa yokuthi utshwala bubangela ukulimala kwe-oxidative okuhamba kancane okuphazamisa ukukhiqizwa kwe-coenzyme.
5. ukulimala kwe-DNA
Lapho iDNA ilimele kakhulu, kuzodingeka ama-molekyuli amaningi e-PARP
ukulungisa futhi ubuyise ukusebenza kwe-DNA elimele. Njengoba amangqamuzana kukhona
inikwe amandla yi-NAD +, ngakho-ke kusho ukuthi ukuzibandakanya kwabo okwandisiwe kungenzeka
bheka ukuntuleka kwento yamakhemikhali emzimbeni wesisulu.
6. umsebenzi sirtuin okuphansi
Uma ucabanga ukuthi i-sirtuin ilawula isigqi se-circadian, amazinga anciphisiwe we-Sirtuin ngakho-ke angahlehlisa i-ebb yesifunda nokugeleza. Ngenxa yalokho, izinga le-NAD + liyancipha.
Ingabe Likhona Side Effects Mayelana nad +?
Ezimweni eziningi, ukwesekwa kwe-NAD + kuphephe ngokuphelele. Ucwaningo lwabantu olwenziwe ukusungula izinga lokuphepha lokwandisa i-coenzyme emzimbeni lukhombisa ukuthi isilinganiso se-1,000mg kuya ku-2,000 mg NAD + nsuku zonke asibanga nemiphumela emibi kubantu.
Kodwa-ke, kunamacala ambalwa lapho imiphumela emibi emincane ibikwe ukuthi yenzeke ngenxa yokudla kwe-NAD +. Le miphumela ifaka isicanucanu, ukugaya ukudla, ikhanda, ukukhathala ngokweqile (ukukhathala) kanye nohudo
Imininingwane eminingi nge-NAD +
I-NAD + powder, esetshenziselwa ukwenza izithasiselo ze-NAD +, imhlophe, i-hygroscopic futhi incibilika kakhulu emanzini. Ifomula yamakhemikhali ye- I-NAD + powder is C21H27N7O14P2.
Uma ungumkhiqizi oqinisekisiwe futhi unentshisekelo ku-NAD + powder ye-NAD + engeza ukukhiqiza, qiniseka ukuthi uyithola emthonjeni odumile ukugwema ukuthenga okungekuhle. Kufanele uqinisekise ukuthi usebenzelana nomthengisi othembekile lapho uthenga isengezo se-NAD +. Qaphela ukuthi ungakwazi uku-oda kalula i-NAD + powder noma i-NAD + supplements online.
I-NAD + coenzyme yi-molecule edlala indima ebalulekile empilweni yabantu. Izinzuzo ze-NAD +, ezibandakanya impilo yengqondo engcono, ukumelana nokucindezelwa kanye nokulungiswa kwe-DNA, kuphakama imiphumela emibi emincane ehambisana nokuhlanganiswa kwe-coenzyme. Ngaphandle kwalokho, inzuzo ye-anti yokuguga yinto ethi labo abafuna ukungancami izimpawu zokuguga kufanele bagxile kuzo ngokunezela kwe-NAD +. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi uqinisekise ukuthi uthola iphakethe lakho leNicotinamide Adenine Dinucleotide / NAD + noma i-NAD + supplement elivela emthonjeni othembekile.
Anderson RM, Bitterman KJ, Wood JG, et al. Ukukhwabanisa kwendlela yenuzi ye-NAD + ye-salvage kubambezela ukuguga ngaphandle kokuguqula amazinga e-NAD + aqinile. J Biol Chem. 2002 Meyi 24; 277 (21): 18881-90.
IGomes AP, Intengo NL, Ling AJ, et al. Ukudilizwa kwe-NAD (+) kwenza izwe le-pseudohypoxic liphazamise ukuxhumana kwe-nuclear-mitochondrial ngesikhathi sokuguga. 2013 Dec 19;155(7):1624-38.
Imai SI, uGuarente L. NAD kanye nama-Sirtuins ekugugeni nasekuguleni. Amathrekhi e-Cell Biol.2014 Aug;24(8):464-71.
Intengo NL, Gomes AP, Ling AJ, et al. I-SIRT1 iyadingeka ukuze kusebenze i-AMPK kanye nemiphumela emihle ye-resveratrol emsebenzini we-mitochondrial. I-Metab cell. 2012 Meyi 2; 15 (5): 675-90.
I-Satoh MS, i-Poirier GG, uLindahl T. NAD (+) - ukulungiswa okuthembekile kwe-DNA elinyaziwe okwenziwa ngamaseli womuntu. J Biol Chem. I-1993 Mar 15; 268 (8): 5480-7.
Sauve AA. I-NAD + ne-vithamini B3: kusuka kuma-metabolism kuya kwezokwelapha. J Pharmacol Exp Ther. 2008 Mar;324(3):883-93.
1.Yini i-NAD +?
2. Ngabe isebenza kanjani i-NAD +?
3.Izinzuzo / Umsebenzi weNAD +
4.Izosetshenziswa / Ukusetshenziswa kwe-NAD +
Umthamo we-5.NAD +
6. Imiphumela Yokuwa kweNqanaba leNAD +
7.Ungawandisa Kanjani Amazinga eNAD + Ngokwemvelo?
Izici eziyisishiyagalombili zehlisa i-NAD +
9. Ngabe Ngabe Kukhona Imiphumela Emibi Mayelana ne-NAD +?
10. Imininingwane eminingi mayelana ne-NAD +